Ọ BỤRỤ na JIZỌS KRAỊST Tarde na-abịa, na chọọchị na-erughị akwụsị ọgbọ! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Dị ka m, onye ọ bụla pụrụ ịhụ na owuwe nke Church emeghị-ewere ọnọdụ na September 13 nakwa na Jizọs Kraịst na-adịghị ahụ laghachiri Earth na 14 ma ọ bụ 15, ma ọ bụ ọbụna na njedebe ọnwa nke September 2015.
M speculated na ụfọdụ nke m isiokwu na nke a nloghachi nwere ike ime n’oge ahụ na m bụ na-ezighị ezi!
Nke a abụghị oge mbụ. Ma dị ka ị maraworị na abụghị m onye amụma!
Otú ọ dị, nke a apụtaghị na anyị abụghị na njedebe nke oge dị nnọọ n’ihu nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Kama nke ahụ, ihe nke September ndị siri nnọọ ike ịrịba ama.
Anyị ahụwo a ịrịba na-akawanye njọ nke Siria agha site na-arụsi ọrụ ike òkè nke ndị agha Russia na a n’ezinụlọ òkè n’ihi na oge nke Chinese agha.
Anyị na-chọpụtara na Pope Francis mere a na-akpali akpali na nkwupụta n’oge ya njem iji US n’oge ya ozizi na St Patrick Katidral.
Translation nke Pope kwuru:
« The cross na-egosi anyị ụzọ ọzọ tụọ ịga nke ọma. Chi anyị bụ na-akụ osisi. Chineke na-ahụ mkpụrụ nke ọrụ anyị. Ma ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ mgbalị anyị na ọrụ yiri ka ada na adịghị amị mkpụrụ, anyị ga-echeta na anyị bụ na-eso ụzọ Jizọs Kraịst, na ndụ ya, esiri na-ekwu okwu, ka biri na ọdịda, na odida nke obe. «
Ọ anwa anwa na-ekwusa na ndụ na àjà Jizọs Kraịst bịara ná njedebe odida n’obe « ọdịda nke cross. »
The pope bụ kasị ndú nke Catholic Church, ya na nkwupụta-apụghị epele.
Ọ bụ ngụkọta agugo nke divinity nke Jizọs Kraịst na bụ Ẹkot ka otu ukara mara ọkwa nke ọnwụ nke Okwukwe na Vatican ma si otú n’ihu na-egosi m isiokwu: « Jizọs Kraịst ghọrọ ihe ngwa NA A akụkụ nke Vatican Museum »
Ya na nkwupụta bụ ihe mbanye na ọ ka furu efu okwukwe na-agọnahụ Jizọs Kraịst.
« O doro anya na anyị Nsọ Catholic Church na-eze nwụrụ US na St. Patrick Katidral ke égbè eluigwe otuto. «
Nke a na nkwupụta nke Pope Francis dị ike nke Akwụkwọ Nsọ na ịrịba ama nke ọgwụgwụ ugboro « ndapụ n’ezi ofufe na » nke mara ọkwa emeriri nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Site n’okwu ọnụ ya Pope ka formalized ndapụ n’ezi ofufe na Vatican crucifying anyị Nsọ Catholic Church.
Ọ hapụrụ ogbi Kraịst niile nke ụwa otú ya kwuru na « odida nke Jizọs Kraịst » na-erughị eru a nke nọchiri anya Pita na okwu mkparị Chineke, bụ Jizọs Kraịst, chọọchị na okwukwe.
N’ihi na anyị na Kraịst, na Pope Francis na-esonụ ya kwuru na ezi onye ọzụzụ atụrụ na onye ruru nnọchiteanya nke Kraịst na Ụwa na ọbụna mere Vatican bụkwa agaghịkwa ebe nke Chọọchị Nsọ Lee Catholic.
Nsọ Lee nke Catholic Church bụ ugbu a ruo mgbe nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na obi nke Kraịst ọ bụla.
Anyị niile ghọọ, ụmụnna mm hụrụ n’anya na ndị nwanyị, ndị nche na okwukwe na okwu Jizọs Kraịst.
Ma Pope na-anọgide na eze na Pope na anyị ga-akwanyere ya ùgwù.
Ọ bụ na Jisọs Kraịst, na nloghachi ya, na Pope Francis ga-aza ajụjụ; dị nnọọ ka anyị nile n’ihi na okwu. Echefula na anyị nile bụ ndị mmehie!
Jizọs Kraịst, bụ nanị nwa nwoke nke Chineke nabatara ịhụnanya na ka anyị na-ihere, kparịrị, na-emegbu, pịa na n’ikpeazụ kpogidere iji gbapụta anyị ná mmehie anyị.
Ọ bụ site na àjà, ọbara na ịhụnanya nke Jizọs Kraịst na ọnụ ụzọ ámá nke heaven na-emeghe ka anyị.
The crucifixion nke Jizọs Kraịst abụghị n’ihi nke a odida ma nweghi ihe yiri àjà nke o mere onwe ya ọkpara Chineke, na-eme ihe site ịhụnanya ya pụọ ​​mmehie nke niile na-abịa ya ma si otú ziri ezi anyị tupu Chineke bụ Nna.
Dị nnọọ ka Chineke kpọlitere Jizọs ndụ mgbe ụbọchị atọ ke n’ili ahụ, Chineke site ịhụnanya, àjà na ọbara Jizọs Kraịst ga-enye ya mgbaghara ga-ahiri ndu mgbe ikpeazụ ikpe ndị niile ga-abịa Jizọs Kraịst.
Ya mere, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ndụ ebighị ebi na Paradaịs n’ihi na anyị ga-e zọpụta ma na a ga-ruo mgbe ebighị ebi n’otu ka Jizọs Kraịst.
Jizọs Kraịst bụ nanị ụzọ ịbanye na alaeze nke eluigwe!
Anyị ga na-ekpe ekpere ugboro ugboro maka nzọpụta anyị nakwa iji nweta kwa ụbọchị enyemaka nke Chineke nke dị oké mkpa ka anyị na ndị a siri ike ugboro nke mbubreyo.
Anyị na-mkpa ikpe ekpere maka nzoputa nke Pope Francis, ụmụ mmadụ ihe, anyị na ụmụnna anyị na ozugbo nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
Anyị aghaghị ịghọta na anyị Church bụ onye na-ama na mwute ikwu na-aga n’ihu na-akpagbu na ụwa, bụ ugbu a na eze nwụrụ anwụ.
Ya mere, anyị bụ ndị m hụrụ n’anya Brothers na ndị nwanyị dị niile na-eru újú na na-eche Onyenwe anyị na Eze Jizọs Kraịst.
Eziokwu ahụ bụ na Pope ka n’ụzọ doro anya na gọnahụrụ Jizọs Kraịst n’ezie agbahapụ ya kwesịrị ntụkwasị obi na chọọchị na-egosi ike na ndapụ n’ezi ofufe bụ n’ezie ugbu a zuru ezu na ofụri ofụri.
Na ọ ga-eme ugbu a?
N’ezie m nwere ike na-eweta ihe nke ọbọrọ ke scaffolding echiche.
Ndị a bụ echiche na ọ bụghị amụma …!
Iji The Church:
Pope Francis yiri ka na-ụwa ndú otu nzukọ nke okpukpe nile. Ọ na-emekwa n’oge na-adịghị ga-ike a O rganization nke R eligions a pụrụ ịkpọ na « ma ọ bụ » Ọ pụrụ ịbụ na onyinyo nke United Nations « UN. »
Ọ baghị uru ikwu na ndị Kraịst bụ ndị sonyere ma ọ bụ na-akwado ndị dị otú ahụ ụmụ mmadụ òtù okpukpe ga-anya site na-esonụ ozizi nke Jizọs Kraịst.
Ọ dịghị ihe agbanweela, ha ga-dị mwute ikwu na rhythms na ọdachi anọgide na ikowa ugboro ugboro ruo mgbe nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Na Agha Amagedọn
M ịnọgide na-kwenyesiri ike na ọ bụ na Siria, na ọ ga-anọgide na onye agha na Israel na-amalite na-ebi ndụ na mmalite nke a agha obodo na ndị a niile ọgụ na Juu na mberede mma.
N’ihi na World Economy:
Ọ bụ ezie na Russia na China melite otu nọọrọ onwe ha usoro ịkwụ ụgwọ na ahia, ọ ga-abụ ihe nzuzu kwere na US ga-anabata-apụghị izere ezere ida nke dollar ma.
The US tupu na-eme ka anyị kama ibu nzọụkwụ kwupụta a ụwa na-enweghị ego na ya mere dabeere nanị na akwụmụgwọ.
The US chọrọ ịmanye na o yiri nnọọ ka na global Ebe E Si Nweta ga-jisiri site EDF.
N’ihi ya ụwa ga-adị ka ohu na na nri ga-jide General Ebe E Si Nweta planet, US ga-eze ndị nna ukwu nke ụwa.
N’ihi na nzukọ nke World Politics:
Anyị ga-nnọọ anya ka a geopolitical nkewa nke ụwa site na-eke ibu oké ike:
« North America – RUSSIA – CHINA – INDIA – AFRICA – EUROPE – AUSTRALIA – South America – JAPAN – KOREA »
Dị ka ị pụrụ ịhụ East abụghị na ndepụta a n’ihi na o yiri na ihe nile dị ebe iwekota Eastern Europe; ebe ebili mmiri nke migrants abịa coincidentally dozie na-agbaba kama ịga dozie ma ọ bụ na-agbaba n’ime Saudi Arabia n’Ijipt ma ọ bụ ndị ọzọ Muslim mba na elu njupụta.
Ị na-eche na ọ bụ site ohere ha na-abịa dajụọ na-agbaba n’ime Europe ebe 1948!
O doro anya na kwupụta ihe m chere anyị na-eme oké strides.
The nnukwu emeriri ndị a echiche ga-N’ezie Christianity na-outvoted na Europe.
« N’ịbụ nke okwukwe Ndị Kraịst
The Catholic Church yiri idikwe akwụsị ma m na-eche na nke a nwere ike ime na-erughị otu ọgbọ!
Anyị na-ahụ na Setan bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụrụ na Jizọs Kraịst bụ bụghị forthcoming, ọ chọta okwukwe na nloghachi ya. (Luk 18: 7,8).
Nke a bụ m hụrụ n’anya Ụmụnna anyị na Jizọs Kraịst, ga-eme n’ọdịnihu nke chọọchị anyị na ọdịnihu anyị Christian yiri ka mie ala site geopolitical amụma oké strategists na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụwa.
Gịnị nwere ike na ihe anyị kwesịrị ime!
Anyị nwere ike isite n’otutu iwu na-emegide ndị mkpebi weere site na ndị a elu global amụma eso ụzọ na-enyere-ahọpụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ na-eme ka agha megide mbata na ọpụpụ electoral usoro.
Ma anyị ga-iburu ihe ndị na-esi …! (Ime Ihe Ike na Civil Agha!)
Anyị nwekwara ike na-egosi na ina ma ọ bụ ụfọdụ na anyị ga-aga n’ihi na ndị ajọ omume.
Ya mere, ka anyị cheta na Jizọs Kraịst gwara anyị ka anyị nwere okwukwe na ya, na-enyere, ka agbata obi anyị n’anya na-atụgharị ntì nke ọzọ ọ bụrụ na ọ akụrisị anyị.
Ya mere anyị nanị olileanya idu ke okwukwe n’Onyenwe anyị na Eze Jizọs Kraịst, bụ nanị nwa nwoke nke Chineke onye kwere nkwa na-abịa zọpụta anyị ka anyị na njedebe nke oge.
Jizọs Kraịst kwere nkwa na-abịa zọpụta anyị na njedebe nke oge na mgbe ahụ anyị na-obi na ọ ga-emezu nkwa ya n’egbughị oge. Ọ bụ a n’aka.
Na-okwukwe n’okwu ya, n’ihi na okwu ya bụ eziokwu.
Jizọs Kraịst bụ Eze m
Anyị niile kwesịrị ikpesi ekpere ike maka ya ozugbo nloghachi n’ihi na anyị na-ahụ na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ na-ama mere.
Amaara m na ọtụtụ nke anyị na ụmụnna anyị na-emechu ihu n’ihi na ịtọrọ e ẹkenịmde ke ọnwa nke September 2015.
Ma Jehova nloghachi dị nso na ọ pụrụ ime ọzọ ma eleghị anya afọ a, 2015.
Ọtụtụ ihe ịrịba ama ekwe ka ewere ya na ya, ma Chineke bụ onye na-ekpebi ụbọchị na oge nke nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Ihe dị mkpa maka onye ọ bụla n’ime anyị bụ na-ekpe ekpere ma na-arịọ Chineke maka enyemaka ịgafe miri ọchịchịrị na wakporo ụwa na ndị na-ezochi ìhè nke okwukwe nke ọtụtụ n’ime anyị na ụmụnna anyị.
Ka ire ọkụ nke okwukwe anyị ọma udo na nchebe si rụrụ arụ nke ụwa a ghara ọ na-aga n’ime mists nke oge.
Jizọs Kraịst bụ n’ụlọ anyị. Kama ọ bụ naanị Chineke kpebie mgbe ma ọ bụ n’ebe ga-egbu. Ya mere ekiri na noro na ịhụnanya nke Jizọs Kraịst na na nnabata na iwu nke Chineke.
Ka anyị-enwe obi ụtọ, n’ihi na ihe ịrịba ama niile na amụma gwa kwa ụbọchị ike emeriri nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Na-okwukwe na eziokwu nke ya ngwa ngwa laghachi.
Na atụmanya nke nloghachi nke Jizọs Kraịst na-ekpe ekpere ma na-enyere ndị Chineke na-eziga anyị.
Ka anyị jide n’aka na Chineke hụrụ anyị n’anya nakwa na mmụọ nsọ ya ga-enyere anyị aka kwa ụbọchị ruo mgbe nloghachi nke Jizọs Kraịst.
Cheta na iji na-enweta enyemaka nke Chineke anyị ga-ajụ ebe a na-ekpe ekpere na-ezi obi na nkwenye siri ike mgbe ọ bụla anyị kwesịrị ya.
Chineke nyere anyị free uche na Ya mere adịghị etinye aka ná ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị adịghị arịọ ya.
M na-agba gị ka ị na-arịọ Chineke ka na-eduzi ụbọchị ndụ gị iji nọrọ na na egwu.
Nke a abụghị oge falter, Jizọs Kraịst bụ na anyị anya na-alọta ndụ anyị ga-gbanwee.
Ịmata ihe ga-eme mgbe nloghachi nke Jizọs Kraịst, m na-agba gị ka ị na-agụ m isiokwu:
Ime ụmụnna mm hụrụ n’anya na ụmụnna nwanyị na Kraịst na-ekwurịta okwu blog adreesị kọntaktị gị.
Ka anyị niile na-agha nke Kraịst na-arụ ọrụ iji na-agbasa okwu ọma « Jizọs Kraịst na-abịa azụ n’oge na-adịghị »
Ekiri na-ekpe ekpere.
Ka ịhụnanya na udo nke Jizọs Kraịst n’elu unu nile.